Meizu ၏ Super mCharge နည်းပညာသည် ၁၈ မိနစ်အတွင်း ၁၀၀% အားသွင်းမှုရရှိသည် Androidsis
နောက်ဆုံး MWC ၂၀၁၇ ဖြစ်ရပ်၊ Meizu သည်ဘာစီလိုနာတွင်လည်းရှိခဲ့သည် တစ်တော်လှန်ရေးသမားထုတ်ကုန်တင်ဆက်ရန် စူပါ mCharge, စံချိန်တင်အချိန်အတွင်းစမတ်ဖုန်းကိုအားသွင်းနိုင်။
ယခုကုမ္ပဏီ ၎င်း၏လျင်မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာ၏စွမ်းရည်ကိုတစ်ဖန်ပြသခဲ့သည် စူပါ mCharge၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်ဌာနချုပ်နှင့်ထိုင်ဝမ်သတင်းထောက်တစ် ဦး ၏ရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမှားအယွင်းများမပြုလုပ်မိစေရန်စာနယ်ဇင်းသမားသည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်နည်းပညာအသစ်အားဘက်ထရီအား ၀ မှ ၁၀၀% အထိအားသွင်းရန်အချိန်အတိအကျကိုတွက်ချက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်သတင်းစာဆရာ၏အချိန်ကုန်သွားသည် 18 မိနစ်နှင့် 12 စက္ကန့်စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိမိုဘိုင်းသည်ထိုအချိန်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည် ၁% ကောက်ခံမှု။ ထို့အပြင်စာနယ်ဇင်းသမားသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွင်းသူသည်ပုံမှန်ထက်ပူလာသည်ရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရန်စက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိခဲ့ပြီးအပူချိန်အဆက်မပြတ်နိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။
Super mCharge နည်းပညာအသစ် Meizu ၏ R&D ဌာနမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည် ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် 98% ၏သူတို့သီအိုရီကန့်သတ် 100% ရနိုင်အနီးဆုံးသော။ ဆိုလိုသည်မှာအားသွင်းခြင်းကာလအတွင်းအပူသို့မဟုတ်အခြားပြင်ပအချက်များကြောင့်စွမ်းအင်အနည်းငယ်မျှသာဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။
Meizu တွင်နည်းပညာအသစ်နှင့်မည်သည့်အစီအစဉ်ရှိသည်ကိုမသိရသေးပါ။ Super mCharge အထောက်အပံ့ဖြင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းများမည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးပါ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းများ၏လုံခြုံမှုကိုပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိအသုံးမပြုမီစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် အကယ်၍ အနီးစပ်ဆုံးရက်ကိုငါပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် Super mCharge ပါ ၀ င်သော Meizu မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်လာမည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင်သာရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်စျေးကွက်ရှိအခြားအမြန်အားသွင်းစက်များတွင်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ က quick တာဝန်ခံ Qualcomm ဒါမှမဟုတ် တာဝန်ခံမထိမခိုက် OnePlus ကနေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Meizu » Meizu ၏ Super mCharge နည်းပညာသည် ၁၈ မိနစ်အတွင်း ၁၀၀% အားသွင်းသည်
မိုဘိုင်းဖုန်း၏အားသွင်းမြန်နှုန်း၏ပြနာ ... အတိုချုပ်အားဖြင့် lithium-ion ဘက်ထရီသည်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘက်ထရီဓာတုဗေဒဓာတုဗေဒသိုလှောင်မှုစွမ်းအင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် voltage / amperage ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ပြproblemနာမှာစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်သောအခါ (ပိုမို amperage / voltage မှတဆင့်) ဘက်ထရီဓာတုဗေဒသည်အပူထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပြုသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မည်သည့်အချက်များနှင့်အညီဖြစ်လျှင်၎င်းမှတ်စုနှင့်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာနှင့်ကိုက်ညီပါက။
Battery ဓာတုဗေဒဟာ lithium-ion ဖြစ်နေသေးပေမယ့် Meizu ကနေအခြားဓာတုဗေဒကိုသုံးပြီးဘာမှမဖတ်ဘူးဆိုရင်အားသွင်းချိန်ဟာလည်းအလားတူပဲ။ တကယ်တော့လက်ရှိ Quickcharge 'technology' (ဒီနည်းပညာကိုခေါ်ဆိုရန်ရာဇ ၀ တ်မှုရှိပြီးဖြစ်သော) သည်ပုံမှန်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသည်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်ထက်မပိုပါကဖုန်းသည်ဗို့ / amperage ပိုမိုထောက်ပံ့သည်။ အပူပေးသောအခါ၎င်းသည် voltage သို့မဟုတ် amperage အားလုံခြုံသောကန့်သတ်ချက်များသို့မရောက်မှီအထိလျော့နည်းစေသည်။ ဆိုလိုတာကတစ်ဘ ၀ သက်တမ်းရဲ့ 5v 2a max ။
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲထောင်ပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများနှင့်လူများရှိသည်။ ဘတ်ဂျက်၏စစ်မှန်အနတ္တနှင့်အတူ။ ၎င်းတို့အနက်မှ Samsung, Panasonic, Tesla ... အမြင့်ဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောတက္ကသိုလ်များနှင့် mp3 format များကိုတီထွင်ရန်အခြားအရာများအကြားလူသိများသောအဖွဲ့အစည်းများ ... ယခုအချိန်တွင်မည်သူမျှစွမ်းအင်ပိုမိုစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ။
မင်းဒီငါ့ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းပြောချင်လား… Meizu ??? မိုဘိုင်းကိရိယာအစိတ်အပိုင်းပေါင်းစပ်? သူ့ဘဝအတွင်း၌သံစုံတီးဝိုင်းကိုမည်သူတစ်ခါမျှမကစားခဲ့ဖူးပါသလော။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်ငါသံသယဖြစ်၏